एमसिसी र गोकुल काण्डाले प्रधानमन्त्री केपि ओलिको सरकार ढल्ने लगभग पक्का पक्की भए पछि यस्तो गरे। | Pabitra TV
एमसिसी र गोकुल काण्डाले प्रधानमन्त्री केपि ओलिको सरकार ढल्ने लगभग पक्का पक्की भए पछि यस्तो गरे।
सोमबार १२ फाल्गुन, २०७६
पोष्ट अवलोकन : 174
फाल्गुन १२ – आफ्नो ६९ औं जन्मोत्सव मनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार एकपछि अर्को संकटमा फस्न थालेको छ । यी संकट आन्तरिक र बाह्य दुबै किसिमका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणबारे जवाफ दिनुपर्नेछ, अन्यथा संसदै चल्न नदिने विपक्षी नेपाली कांग्रेसले माग राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ देलान्/नदेलान् त्यो दुई दिनपछि थाहा हुनेछ । तर, उनले संसदमा जवाफ दिएनन् भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनका बैठकहरु प्रभावित हुने देखिन्छन् । तर, ओली सरकार बाह्यभन्दा बढी आन्तरिक संकटमा फसेको छ । गोकुल बास्कोटा काण्डले आम जनमानसमा पनि सरकारमाथि तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
आफ्नो दाहिने हात मानिँदै आएका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विवादमा तानिएर पदच्युत बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बनेका छन् । ठीक यहीबेला प्रधानमन्त्रीमाथि अर्को बज्रपात परेको छ – एमसीसी कार्यदलको रिपोर्ट । एमसीसी जसरी पनि पास हुन्छ भनेर संसदभित्र र बाहिर गर्वका साथ बोल्दै आएका प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाइदिएको छ ।
अब पार्टीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टीको निर्णयलाई लत्याएर अघि बढ्ने ? प्रधानमन्त्री ओली धर्मसंकटमा परेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनबारे अब सचिवालयमा छलफल हुनेछ, जहाँ बहुमतले एमसीसी संसदबाट पारित नगर्ने निर्णय गरिदियो भने प्रधानमन्त्री ओली थप नैतिक संकटमा पर्नेछन् । सचिवालयले कार्यदलको निर्णय हुबहु लागू गर्न भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुको विकल्प रहने छैन । पार्टीको निर्णय नमान्दा उनीमाथि बहुमतको डण्डा चल्ने खतरा छ ।
किनभने, सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा तीनजना र प्रचण्ड-माधव पक्षमा ६ जना छन् । ओलीतिर उनी आफू, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल छन् भने माधव-प्रचण्ड समूहमा झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादलसमेत छन् । एमसीसीका बारेमा अहिलेसम्मको समीकरण कायमै रह्यो भने त्यो पारित नहुने अवस्था आउन सक्छ । एमसीसी पारित भएन भने प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म संसदभित्र र बाहिर बोलेका कुराहरु अमान्य ठहरिने छन् ।
एमसीसी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली संकटमा फसेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले उनले अमेरिका भ्रमणदेखि लिएर विभिन्न बैठकहरुमा भाग लिँदै आएका छन् । क्याबिनेटले नै पारित गरिसकेको यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्न भूमिका खेल्नु मन्त्री ज्ञवालीको पनि दायित्व हो । तर, झलनाथ कार्यदलमा बसेका ज्ञवालीले समेत यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निश्कर्षमा सहमति जनाएको संयोजक खनालले बताइसकेका छन् ।
यदि ज्ञवालीले एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्नुहुँदैन कार्यदलको भनेर प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका हुन् भने त्यो उनको दाहोरो भूमिका हो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने अनि पार्टीको कार्यदलमा हुँदैन भन्ने हो भने यसबाट परराष्ट्रमन्त्री माथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ, उठेको छ । यी नैतिक प्रश्नमा उभिएर परराष्ट्रमन्त्रीले राजीनामा दिए भने प्रधानमन्त्री थप कमजोर हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवाली अहिले जेनेभा भ्रमणमा छन्, उनी १६ गते मात्र स्वदेश र्फकँदैछन् । यहीवीचमा नेकपा सचिवालयमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैछ ।
आगामी फागुन २० गतेबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मन्त्रीपद रिक्त हुँदैछ । गोकुल बास्कोटा र प्रदीप ज्ञवालीजस्तै डा. खतिवडा प्रधानमन्त्रीका बलिया सारथी हुन् । बहुमतमा रहेका माधव- प्रचण्ड समूह अर्थमन्त्रीलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा छ, सचिवालयमा उनीहरुकै बहुमत छ । माधव- प्रचण्ड समूहको चाहना फागुन २० पछि निर्वाचित सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउने भन्ने छ ।
यो अवस्थामा डा. युवराज खतिवडाको निरन्तरता रहेन भने ओली सरकार झनै कमजोर हुन जाने निश्चित छ । सचिवालयलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री अघि बढेमा यहाँ पनि उनीमाथि बहुमतको डण्डा चल्न सक्ने नेकपाको पछिल्लो समीकरणले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री माथि ओलीमाथि आइलागेको अर्को चुनौती के हो भने यहीबेला उनको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने छ । यसका लागि केही महिना भौतिकरुपमै आराम गर्नुपर्ने हुन्छ । झनै सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही रहेर किड्नी ट्रान्सप्लान्टका लागि समय निकाल्नु उनको अर्को भवितव्य अर्थात संकट हो ।
Tags: kp oli, MCC, एमसिसी, केपि ओलि, प्रधानमन्त्री केपि ओलि, भ्रष्टाचार, सन्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद
धुर्मुस सुन्तलिलाई सेण्टि भाइरस लागे पछि हलमा आएका दर्शकले यस्तो सम्म गर्न भ्याएछन।
प्रधानमन्त्री ओलि नै ७० करोड प्रकरणका प्रमुख हुन। उनकै घरबाट डिल भएको थियो।भ्रष्टाचारको गुडबाट सुढृकरणको भाषण